“Cadaalad darro iyo is xaqiraad ayaa sabab u ah…
Madaxweynaha Dowlad Goboleedyada KFS Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in dhibaatooyinka dalka ka jira ay sabab u yihiin dulmiga, Cadaalad darro iyo Is xaqiraada.
60-sano oo madax banaanida Soomaaliya laga joogo waxa uu sheegay qayb kamid ah dalka uu ku jiray dagaal Sokeeye, Cadaalad darro, Is xaqiraad, dhac iyo dhibaatooyin kale oo dhammaan sababay in nidaamka iyo kala dambeynta la waayo.
Dadaalo kala duwan ayuu sheegay in ay sameeyeen dadka indhaha u ah Bulshada, iyaga oo dhisay nidaam dowladeed oo dhowrkii sanaba lagu soo gudbayay ilaa maanta la gaaro heerka dalka uu marayo.
Ciidanka Gobaladda Waqooyi oo maanta dhaqdhaqaaqyo ka wada gobolka…
“30-sano ayuu dalkaan dhibaato ku jiraa, fursaddu maalinba maalinta ka dambeyso waa ay ka wanaagsan tahay, inta aan calanka la saarin waa in aan ka doodnaa oo aan kawada fadhiisanaa nidaamka federaalka si loo toosiyo Dowladnimada” ayuu yiri Hogamiye KGS.
Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Waxa aan soo dhaweyneenaa xasiloonida, midnimada iyo dhismaha Dowladnimada oo aan qayb muhiim ah ka nahay, koofur Galbeed waa 3-Gobol oo waaweyn, Shacab iyo maamul waa in ay la isku duubnaadaan si kaalinteeda aan u dhumin”.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, waxa uu shaaciyay in nidaamka federalka ee xal ahaanta loo qaatay looga fakirayay 60-kii iyo 50-kii.
Arrinta Amniga, Shacabka iyo maamulka ayuu ugu baaqay in ay iska kaashadaan qorshaha go’doonka looga saarayo, maadaama isu socodka dadka iyo gaadiidka Degmooyinka Koofur Galbeed joogsaday.